NgoLwesihlanu omnyama ngo-2016, ukubonelela nge-21 ukuya kuNovemba 24 | IPhone iindaba
NgoLwesihlanu omnyama ngo-2016, unikezela ngoNovemba 21-24
Le veki yi ULWESIHLANU omnyama, usuku apho amashishini amaninzi anikezela ngezaphulelo ezibonakalayo kuzo zonke iintlobo zeemveliso, nangona ekuqaleni ezi zaphulelo kufuneka zibe kwizinto ezinxulumene netekhnoloji. Kule posi siza kukhetha ezona zinto zibalaseleyo onokuzikhumbula, okanye ubuncinci kuya kuba kufanelekile ukuba uzijonge. Ngubani owaziyo? Kukho into oyifunayo ngesaphulelo se-60%.
Nangona siza kuyisasaza kwakhona kwiinethiwekhi zentlalo, esi sithuba siya kuhlaziywa rhoqo kubandakanya nokunikezelwa okutsha, ke kufanelekile ukuba ujonge rhoqo. Ezinye zezizibonelelo zilandelayo ziyafumaneka ukusukela namhlanje kude kube ngeveki yokuqala kaDisemba, kodwa ezinye ziya kusebenza kuphela namhlanje kwaye ezinye ixesha elincinci. Lumka, ukuba siqhwanyaza singaphoswa yinto enomdla.
1 Hlaziya ngezithembiso ezivela nge-24 (kubandakanya neziboniso zeFlash)
1.1 Isithethi esingenacingo esiphathwayo seVicTsing
1.2 Inateck-Ibhakhowudi yeLaser Scanner
1.3 I-Foxpic RealFlash
1.4 Umnqwazi iBluetooth, Rotibox
1.5 Elgato Avea Flare
2 Ukunikezelwa kwe-23 (kubandakanya ukunikezelwa kweFlash)
2.2 I-Aukey HD-P8 iSelfie Stick
2.3 Iibhetri zangaphandle zeLizon QC
2.4 Isithethi seWifi yeWifi yeGGMM E3
2.5 Indlela yeGarmin yeGPS S5
2.6 Samsung Gear S2
3 Izithembiso zeFlash ze-22 (zexesha elimiselweyo)
3.1 Iifowuni ze-EasySMX zaBantwana
3.2 I-AUKEY Iifowuni zeBluetooth 4.1
3.3 I-adaptha yamandla e-Apple 1A yoqobo + imitha enye
3.4 I-Aukey PB-N37-Itshaja ephathekayo (5000 mAh)
3.5 UKHUSELEKILE Kwimeko yeBhetri ye-iPhone 6 / 6s
3.6 I-SAVFY ® Imeko engabonakaliyo ye-iPhone 7 / Plus
3.7 1byone Ikhibhodi engenazingcingo yeBluetooth
3.8 I-VIVIS 20000mAh
4 Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu ngoNovemba 22
4.1 I-B & O BeoPlay H7
4.2 IBluedio A (Umoya)
4.3 Sony Smartwatch 3
5 Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu ngoNovemba 21
5.1 Intlawulo ekhawulezileyo ye-Aukey 3.0
5.2 IPhone 6 Plus
5.3 IHuawei Bukela iKlasikhi
5.4 IPolar V650 HR kwiKhompyuter yeBhayisekile
5.5 Iselfowuni Onetouch Pop 3
6 Izithembiso zeFlash ze-21 (zexesha elimiselweyo)
6.1 IBelkin MiXIT
6.2 Noontec Hammo Yiya
6.3 Iiyunithi ezi-3 zombane MFi ISELECTOR iintambo
6.4 I-Aukey VR-O2
6.5 Umtya weJETech weApple Watch
Hlaziya ngezithembiso ezivela nge-24 (kubandakanya neziboniso zeFlash)
Isithethi esingenacingo esiphathwayo seVicTsing
Izithethi ezingenazingcingo zizixhobo ezithandekayo. Ngeso sizathu namhlanje ndiza kongeza kuluhlu lwe Akukho mveliso ifunyenweyo. Iyahambelana naso nasiphi na isixhobo esiphathwayo kwaye sinebhetri eya kusivumela ukuba simamele umculo malunga neeyure ezisi-8. Ngexesha lomhla ka namhlanje singayithenga nge- € 39.99 Enkosi kwi 33% isaphulelo.
Inateck-Ibhakhowudi yeLaser Scanner
Andiqinisekanga ukuba izakunceda abasebenzisi abaninzi, kodwa ndiyifumene inomdla ukuyibeka kuluhlu lwezinikezelo nge-24. Inateck-Iskena seLaser ... iyahambelana ne-iPhone. Namhlanje uya kuba ne Ixabiso le- € 43.99.
Akukho mntu unokuyiphika into yokuba iRetina Flash kwi-iPhone 6s okanye kamva ilungile, kodwa kuthekani ukuba sifuna ukukhanya okungakumbi? Ewe, kukho i-xenon flash ebizwa I-Foxpic RealFlash oko kunokusinceda. Ngexesha langoku liza kufumaneka ngexabiso le- € 34.38, zombini imodeli Akukho mveliso ifunyenweyo njengomzekelo Akukho mveliso ifunyenweyo.
Umnqwazi iBluetooth, Rotibox
Inyani yile yokuba khange ndicinge ukuba ndiza kupapasha umnikelo wenqaku lempahla, kodwa oku Akukho mveliso ifunyenweyo Ayisiyongubo kuphela eya kuthi igqibelele kwiintsuku ezibandayo ezizayo. Ngumnqwazi nawo izakusivumela ukuba simamele kwaye silawule umculo we-iPhone yethu. Namhlanje iya kufumaneka ngexabiso le- $ 23.96. Zininzi ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, kodwa lumka ukuba ayizukuthengiswa yonke.
Ndiyabazi abantu onokuthi bathi bayaliwa zizibane xa kukhanya. Aba bantu bayathanda ukusebenzisa ukukhanya okukufutshane, njengaleyo sinokuyifumana Elgato Avea Flare. Ukuba sinokulawula amandla ayo nge-iPhone okanye iApple Watch, konke kuya kuba ngcono. Namhlanje sinokuthenga oku kukhanya kwe-Elgato ngexabiso le- € 69.95.
Ukunikezelwa kwe-23 (kubandakanya ukunikezelwa kweFlash)
Ngokwam, akucaci kum ukuba abona bathandi bomculo banomdla kwi irekhodi lomdlali wevinyl enje, kodwa ndiyifumene inqaku elinomdla. Imalunga nayo 1ibhetyebhetye ukuba, ukongeza ukudlala iirekhodi ze-vinyl, kuya kusivumela ukuba sidibanise i-iPhone yethu kunye nezinye izixhobo zeBluetooth. Ngexesha leveki yangoLwesihlanu oMnyama kuya kubakho iyafumaneka nge- € 99.99.
I-Aukey HD-P8 iSelfie Stick
Ngubani ongaziyo ukuba yintoni intonga yeselfie? Ndicinga ukuba izimvo zishiyiwe. Inkqubo ye- Akukho mveliso ifunyenweyo Yintonga ye-selfie eya kusivumela ukuba sithathe iiselfie njengayo nayiphi na enye, kodwa oko kubuyela umva ukuphucula ezothutho. Namhlanje kunesaphulelo kwaye ushiywe nge Ixabiso le- € 5.99.
Iibhetri zangaphandle zeLizon QC
Ukuba ukhathazekile kukuba i-iPhone yakho iyakuphelelwa yibhetri ngakumbi xa usiya kuhambo lweentsuku ezininzi, uya kuba nomdla wokwazi ukuba ngalo Lwesihlanu umnyama sineebhetri ezininzi zeLizon ngesaphulelo:
ILizone®QC 24000mAh 5-Izibuko: Negro; Dorado; Rose Gold; Isilivere.
ILizone®QC 35000mAh 5-Izibuko: Negro; Isilivere.
Isithethi seWifi yeWifi yeGGMM E3
Ukuba into oyifunayo sisibonelelo esiza kukugcinela imali eninzi ngokuthenga isithethi seBluetooth, into oyifunayo yi-GGMM E3. Ukongeza ekudlaleni umculo, ikwabonisa ixesha, ukuyenza ifaneleke ukubeka kwitafile esecaleni kwebhedi kwaye uyisebenzise njengewotshi yealam. Iyahambelana neSpotify kunye nePandora. Esi sithethi sifumaneka namhlanje ngesaphulelo se- € 120 kwiimodeli zayo mhlophe y luhlaza.
Indlela yeGarmin yeGPS S5
Namhlanje, umlindo wegalufa Yindlela S5 izakufumaneka ngesaphulelo se-14%, esiya kukugcina ngexabiso le- € 299. Le wotshi iyahambelana ne-iPhone 4S okanye kamva.
Le wotshi isuka kwisigebenga saseKorea yenye yezona ndlela zibalaseleyo kwiApple Watch. Okwangoku kwaye ngelixa isithembiso sihlala, iimodeli ezintathu ziya kuncitshiswa, isibonelelo se- I-Samsung Gear S2 Classic yeNkulumbuso yeRose Gold nge € 299, imodeli Umnyama oMnyama Ye- € 319 kunye nemodeli umdlalo Ixabiso le- $ 264.99.
Izithembiso zeFlash ze-22 (zexesha elimiselweyo)
Iifowuni ze-EasySMX zaBantwana
NgoLwesihlanu omnyama kufanele ukuba ibe yeyomntu wonke kwaye oko kubandakanya neyona incinci yosapho. Namhlanje sinokuthenga ii-headphone zabantwana I-EasySMX ngesaphulelo esingekho ngaphantsi kwe-71%, ebashiya nge Ixabiso le- € 19.99. Ixabiso layo elingazisiyokuthengisa yi- € 69.99. Kuyathakazelisa ukukhankanya ukuba, umzekelo, ivolumu ebonelelwa zezi headphone ayiphezulu kakhulu, eya kuthi ikhusele iindlebe zabancinci.
I-AUKEY Iifowuni zeBluetooth 4.1
Siyaqhubeka nee-headphone, kodwa ngoku sinazo zabantu abadala: the ii-headphone ezisezindlebeni Akukho mveliso ifunyenweyo. Ngelixa intengiso ye-flash ihlala, sinokuzithenga ezi ntloko nge-24%, ebashiya nge Ixabiso le- € 15.99.
I-adaptha yamandla e-Apple 1A yoqobo + imitha enye
Nawuphi na umsebenzisi weendaba ze-iPhone kufuneka azi ukuba itshaja ye-iPhone okanye i-iPad injani, akunjalo? Ukuba nangasiphi na isizathu ufuna esinye, uya kwazi ukuba kuya kufuneka uhlawule iindleko ... okanye usebenzise isaphulelo sama-20% koku (ekucingelwa) Itshaja yentsusa yeApple kunye nentambo yombane ye1m ukuba namhlanje ishiywe ngexabiso le- € 19.16.
I-Aukey PB-N37-Itshaja ephathekayo (5000 mAh)
Nangona ndingenangxaki ngebhetri ye-iPhone yam, ndiyazi ukuba abasebenzisi abaninzi banokukhetha isixhobo sabo ukuba sikwazi ukuhamba ixesha elide ngaphandle kokuqhagamshela kwivenkile yamandla. Into elungileyo kukuba zikhona ibhetri zangaphandle njenge Akukho mveliso ifunyenweyo, eya kuthi ivumele malunga neerhafu ezimbini ukuba zongezwe kwi-5.5-intshi ye-iPhone. Le bhetri yangaphandle iyafumaneka namhlanje nge Ixabiso le- € 9 eyehla isuka kwi- € 24.99 ngaphandle kwenyuselo.
UKHUSELEKILE Kwimeko yeBhetri ye-iPhone 6 / 6s
Sithanda uyilo lweApple, kodwa ndicinga ukuba icala lebhetri Ibhloko ayisiyonto ilungileyo eyenziwe liqela elikhokelwa nguTim Cook ngoku. Ukuba ufuna ityala lebhetri kwi-iPhone 6 okanye 6s yakho, namhlanje sinesaphulelo sama-67% kwi UKHUSELEKILE Ityala lebhetri, eshiya ngexabiso le- € 14.39.
I-SAVFY ® Imeko engabonakaliyo ye-iPhone 7 / Plus
Kudala ndiphethe i-iPhone yam kwimeko endizenzele yona, evumela ukuba ndikonwabele ukubamba kwabo ngalo lonke ixesha ndizisebenzisa ngokubathinta ngqo, kodwa kuya kufuneka ndivume ukuba ndingothusa xa ithe yawa Ezam izandla. Ukuthintela olu hlobo loyikiso, sinokusebenzisa ukhuseleko olufanaI-SAVFY imeko ebonakalayo ye-iPhone 7 Plus ukuba namhlanje unesaphulelo sama-67% kwaye ishiyeke nayo Ixabiso le- € 7.29. Iyafumaneka Inguqulelo ye-iPhone 7 ngexabiso le- € 7.01.
1byone Ikhibhodi engenazingcingo yeBluetooth
Ukuba u khangela ikhibhodi engenazingcingo onokuyisebenzisa nge-iPhone yakho okanye kwi-iPad, unokuba nomdla kwifayile ye- 1byone Ikhibhodi engenazingcingo yeBluetoothIsindululo esisonga ukuthuthwa ngokulula. Namhlanje izakufumaneka ngesaphulelo sama-25% kwaye singayithenga ngee-29.99 zeerandi. Iyafumaneka ngombala omnyama nomnyama / ongwevu kwaye zombini zinamaxabiso afanayo, nangona kukonyuselwa okwesibini kubiza kakhulu.
Iibhetri eziphathekayo zininzi, kodwa azikho ezininzi njenge Akukho mveliso ifunyenweyo, ngaphezu kwayo nayiphi na into enokuyinika amandla. Ukuphuma kwintengiso inexabiso le- € 79.99, kodwa namhlanje elo xabiso liza kuncitshiswa laya kwi- € 23.99 ngenxa yesaphulelo sayo se-70%.
Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu ngoNovemba 22
I-B & O BeoPlay H7
Siqale ngee-headphone ukuba abathandi bomculo baya kuthi bazi ngakumbi ngazo. Imalunga ne- Iingcingo ezingenazingcingo I-B & O BeoPlay H7 ukuba namhlanje banesaphulelo esingekho ngaphantsi kwe- € 160 (36%), behlisa ixabiso labo lokuqala ukusuka kwi- € 449 ukuya kwi- € 289. Nangona zikhona ezinye iimodeli ezinesaphulelo, esona sinesaphulelo esikhulu yimodeli engwevu.
IBluedio A (Umoya)
Ukuba ujonga ii-headphone ezingenazingcingo kwi-iPhone 7 yakho kwaye awufuni kuchitha imali eninzi, namhlanje sineBluedio A (Air) ngesaphulelo esingekho ngaphantsi kwama-60%, esikushiya Ixabiso le- € 39.99, zombini kwimodeli Mhlophe imodeli Negro.
Ewe ayisiyi-Apple Watch, kodwa iwotshi enoyilo olulungileyo oluhambelana ne-iPhone. Imalunga newotshi efanelekileyo Sony Smartwatch 3, ekhoyo namhlanje ngesaphulelo esingekho ngaphantsi kwama-48%, eshiya imodeli yentsimbi engwevu nge Ixabiso le- € 144.99. Ukuba ufuna iwotshi efanelekileyo ngaphandle kwe-Apple, olu lukhetho olulungileyo.
Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu ngoNovemba 21
Intlawulo ekhawulezileyo ye-Aukey 3.0
Namhlanje i-Aukey isinika iimveliso zayo ezininzi ngesaphulelo esibalulekileyo, njengeAkukho mveliso ifunyenweyo eye yaxabisa i- € 32.99 yaya kuphela 11.99 €. en LONTO Unazo ezinye izinto ezivela kuhlobo olunye, zonke ezinezaphulelo ezibalulekileyo ekufuneka uzijongile.
Siqale olu luhlu lweentengiso zeLwesihlanu oMnyama ngendlela engoyikiyo. Asinakuthi izixhobo zeApple zinexabiso eliphantsi, yiyo loo nto ndifumana isipho esibonelelwa yi I-iPhone 6 Plus kwisilivere (ehlaziyiweyo) ngesaphulelo sama-27%, esikushiya nge Ixabiso lokugqibela le- $ 509.
IHuawei Bukela iKlasikhi
Ndiyazi ukuba le yi-iPhone News kwaye, ithiyori, kufuneka sipapashe izibonelelo ezinxulumene nefowuni yeapile okanye iimveliso zeApple. Kodwa sinecandelo elibizwa ngokuba "Ukhuphiswano" kwaye kulapho le smartwatch izakubonakala intle. Kwakhona, i-Android Wear (ngaphezulu okanye ngaphantsi) iyahambelana ne-iOS. Ngayiphi na imeko, namhlanje sine IHuawei Bukela iKlasikhi ngesaphulelo sama-28%, esihlala apha Ixabiso lokugqibela le- $ 287,92.
IPolar V650 HR kwiKhompyuter yeBhayisekile
Ndimele ndivume ukuba oku kuyandonwabisa. Ukuqala namhlanje kude kube isiphelo siphela sinekhompyuter yomjikelo ekhoyo IPolar V650 HR ngesaphulelo sama-24%, esikushiya nge Ixabiso le- € 206.50. Ukuba uyazibuza ukuba inantoni na le Apple, esi sicelo sePolar sinokudityaniswa neStrava, esona sicelo sithandwa kakhulu ngabagijimi nabahambi ngebhayisikile.
Iselfowuni Onetouch Pop 3
Apha sinelinye lala manqaku anokuhamba kudidi lwe- «Ukhuphiswano». Yifowuni enesikrini esine-intshi ezi-5.5 kunye neSIM emibini enenkqubo yokusebenza ye-Android Iselfowuni Onetouch Pop 3 ukuba ukusukela namhlanje kude kube sekupheleni kwesithembiso iyafumaneka nge- € 99 enkosi kwisaphulelo se- € 29.
Izithembiso zeFlash ze-21 (zexesha elimiselweyo)
Ngexesha likaNovemba 21 siyakuba nesiseko sokutshaja IBelkin MiXIT ngesaphulelo esiya kumshiya ngee-25.98 zeerandi. Le ndawo yokutshaja iyahambelana nezixhobo ze-iPhone ukusuka kwi-iPhone 5 ukuya kwi-iPhone 7.
Noontec Hammo Yiya
Ngexesha phantse lonke losuku lwanamhlanje siya kuba nee-headphone ngesaphulelo esibalulekileyo Noontec Hammo Yiya, ukwehlisa ixabiso ukusuka kwi- € 149.57 ukuya kwi I-119.95 € kwimodeli yePinki / emnyama. Isenokungabi luphawu olwaziwa kakhulu (ubuncinci kum), kodwa ezi ntloko zinokurhoxiswa kwengxolo, kubaluleke kakhulu wakuba uzame.
Iiyunithi ezi-3 zombane MFi ISELECTOR iintambo
Iintambo zombane zika-Apple zihle kakhulu, kodwa sonke siyazi ukuba ukuba asilumkanga kakhulu, ziphela zisaphula apho zidibana khona ne-iPhone okanye i-iPad. Ukuba eyakho yaphukile, namhlanje siya kuba nayo Iziqwenga ezi-3 ze-ISELECTOR Lightning MFi cables ngenxa Ixabiso le- € 18,99, ephumela ngaphezulu nje kwe- € 6 ngentambo nganye.
I-Apple kusafuneka ilungiselele izixhobo zayo ngokwenyani, kodwa into inokwenziwa. Ukuba ufuna ukubona iividiyo apho kukho iliso ngalinye, namhlanje ungathenga iiglasi eziyinyani Akukho mveliso ifunyenweyo yi Ixabiso le- € 13,99 eye yehla isuka kwi- € 24,34. Ewe zisebenza kuphela kwi-iPhone 6, 6s kunye ne-7 ye-4,7 intshi okanye enye ukuya kwi-5.2 intshi.
Umtya weJETech weApple Watch
Ukuba ujonga umtya wentsimbi kwiApple Watch yakho, namhlanje IJETech inikeza enye yazo emnyama kumzekelo we-42mm ye Ixabiso le- € 16,95. Yintambo yentsimbi engenasici ukuba abasebenzisi abayithengayo bayithanda kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » NgoLwesihlanu omnyama ngo-2016, unikezela ngoNovemba 21-24
ULouis V sitsho
Kulungiselelwe abo banomdla, iAmazon yi-Apple Watch yokuqala (uguqulelo lwentsimbi engenasici, i-38mm) nge- € 299.
Phendula uLuis V
Ukukholelwa kwiipesenti zesaphulelo eziboniswe yiAmazon ziyazikhohlisa, unokufumana iimveliso zalawo akhankanywe ngexabiso elifanayo kwezinye iiwebhusayithi.
Kulungile ukwazi ukuba zithengisiwe kodwa jonga kwenye indawo.
I-BusyCal, isimahla ixesha elilinganiselweyo
I-Apple isungula inkqubo entsha yokulungisa ii-iPhone 6s